Last updated on January 12, 2021 By Clinic Harley Street
Ny fandidiana kosmetika dia nitombo tamin'ny lazany tato anatin'ny taona vitsivitsy, indrindra noho ny fanohanan'ny olo-malaza maro sy ny fandrakofan'ny media. Na fampitomboana ny tratra izany, implant ny takolaka na liposuction any London, ny isan-karazany ny fitsaboana mitombo tsy tapaka isan-taona. Ny iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ny maro dia ny toeram-pitsaboana hampiasaina amin'ny fomba fitsaboana amin'ny tarehy. Iray amin'ireo toeram-pitsaboana malaza fanaovana kosmetika hita any amin'ny faritr'i Londres, dia toeram-pitsaboana cosmetika malaza sy malaza Harley Street, antsoina hoe CSC na Clinic Cosmetics Surgery, notarihin'i Dr Alan Kingdon, iza ny tenany no manana 30 taona niainany tamin'ny naha mpandidy kosmetika anao. Ny tobim-pahasalamana dia manolotra ambaratonga marobe amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ary koa fomba fanao amin'ny kosmetika feno ary hita ao amin'ny http ny fisiany amin'ny Internet://www.cosmetics.org.uk.
Ity tranonkala manaitra ity dia manasongadina ny haren'ny traikefa sy ny fomba fanao amin'ny fandidiana kosmetika hita ao amin'ny Clinic Cosmetic Bedah. Ny tobim-pahasalamana dia manolotra ny fomba feno sy fomba fitsaboana amin'ny tarehy, ao anatin'izany ny implants ny takolaka hatramin'ny alàlan'ny fanosotra amin'ny safidy London, ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy. Ampiasao ny sasany amin'ireo haitao farany sy ireo fomba mandroso indrindra azo, ny ekipan'ny manam-pahaizana manokana dia manome traikefa miavaka sy fahalalana ary fanoloran-tena ho an'ilay asa.
Tsy manam-paharoa amin'ny lafiny maro amin'ny fandidiana kosmetika, one of the key benefits of this clinic is the YOU first philosophy observed by the clinic and its staff which is the central focal point of their work ethic. This customer focused ethos is the key to the success of the clinic and encompasses a high standard of care and impartial guidance ethic.
For further information visit http://www.cosmetics.org.uk
Lehilahy iray avy any Greater London no lasa olona faha-100 notsaboina tao amin'ny CyberKnife Center voalohany any UK ao amin'ny Harley Street Clinic malaza any London. Ilay lehilahy, izay efa voan'ny homamiadan'ny prostaty, Tsy afaka notsaboina tamin'ny endrika radioterapy hafa. Izy dia iray amin'ireo marary mitombo hatrany izay nalefa tany amin'ny Harley Street Clinic momba ny fitsaboana amin'ny fitsaboana CyberKnife avy amin'ny fitokisan'ny NHS..
Bebe kokoa Lahatsoratra Harley Street Harley